Hong Kong: Ny Fihaonambe Wikimedia Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Hong Kong: Ny Fihaonambe Wikimedia Shinoa
Voadika ny 16 Oktobra 2017 13:01 GMT
(Marihina fa tamin'ny 28 Aogositra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Natao tao Hong Kong ny Fihaonambe Wikimedia Shinoa ny faran'ny herinandro lasa teo (26-27 aogositra 2006). Nahitana ny lahateny fototra nataon'i Jimmy Wales, mpanorina sady mpitarika ny Filankevi-pitantanan'ny Orina Mpanasoa Wikimedia ny fihaonambe naharitra roa andro, sy ireo lahavolana sy fivoriana hafa nataon'ireo mpanatrika ny fihaonambe avy any amin'ny faritra. Lohahevitra noresahina ny votoaty, ny teknolojia, ny olana ara-pananganan-dalàna sy ara-tsiansa sosialy manodidina ny tetikasa Wikimedia. Nahitana ny Mpanolotsainan'ny Mpanao lalàna, Atoa Sin Chung-Kai, Rtoa. Christine Loh, sns ireo mpandahateny hafa nasaina.
Nitanisa ny gazety tao an-toerana izay nisafidy ny hanao tatitra fa tsy hitatitra momba ny fihaonambe i Chihiro avy ao amin'ny inmediahk.net, ary niezaka namaky ny tao anatin'ny natiorany : manana tokotany fanohanana ny governemanta Shinoa (zh) ny ankamaroan'izy ireo.
Namahana bilaogy momba ny fahitany ireo mpandray anjara i Yeahayeah sy ny fahadisoam-panantenany tamin'ny fihaonambe:
“Amin'ny ankapobeny, nahita ny karazan'olona toy izao manaraka izao aho: ny karazany voalohany dia ireo izay nihevitra fa nanakorontana izao tontolo izao ny wiki , liana amin'ny mety ho fivoaran'ny karazana tolotra maimaim-poana toy izany ho maodely ara-barotra izy ireo ; ny faharoa dia ireo ankizin'ny teknolojia izay liana amin'ny wiki sy ny karazana teknolojia hafa; Ny karazany fahatelo dia ireo izay tena mpitantana hentitra mikasa ny hihazona ny filaminan'ny wikipedia. “
Diso fanantenana izy indrindra tamin'ny adihevitra momba ny olan'ny sivana raha nilaza fotsiny ny mpandahateny fa fahefan'ny governemanta Shinoa feno izany, tamin'ny farany:
” Nanolo-kevitra ny famafana ny teny saropady ara-politika rehetra ny zaza tsy manan-tsiny, izay mitady fotsiny ny wiki hanangana ny fibahanan-toerany ao Shina.”
Namahana bilaogin-tsary vitsivitsy ary nanome rohy tsy nisy fanehoan-kevitra maro i Charles Mok, iray amin'ireo mpandahateny avy any Hong Kong.
Namahana bilaogy momba ny zava-misy izay voarainy avy amin'i Jimmy Wales i Chiao, avy any Taïwan, sy ny fahitany momba ireo Wikipédiana ao Hong Kong :
HK Wikipedian is very, very young. High school kids, many of them.
Tena tanora mihitsy ny Wikipediana HK. Maro amin'izy ireo no ankizy avy amin'ny lisea.